HALKAAN KA AKHRISO WARARKA WARGEYSKA M. TIMES EE MAANTA OO AH KHAMIIS 13-KA JAN. 2022
Thursday January 13, 2022 - 08:32:00 in Wararka by Mogadishu Times
Wasaarada Amniga Oo Fasaxday Bann aanbax Berri Ka Dhacaya Muqdisho
Wasaarada Amniga ayaa fasaxday banaanbax lagu taageerayo ra’iisul wasaare Rooble oo la qo rsheeyay inuu berri ka dhaco ma gaalada Muqdisho.
Qoraal kasoo baxay Wasaar adda Amniga oo ku taariikheysan 10-kii Bishaan ayaa waxaa lagu sheegay in banaanbaxa ay Wa saaradda ka codsadeen Golaha Bulshada Bana adir in hay’adaha amniga ay amnigooda sugaan inta ay banaanbaxa oo ay ku muujinayaan daree nkooda siyaasadeed iyo taageerida dardar geli nta doorashooyinka dalka.
Wasiirka Amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa faray Taliyaha Booliska Soomaaliyeed iyo Taliyaha Qeybta Guud ee Gobolka Banaadir inay sugaan amniga bannaan baxayaasha. Sidoo kale qaban qaabiyeyaasha bannaan baxa ayuu u gu baaqay inay ka foggaadaan wax rabshado ah
Hase yeeshee waxaa banaanbaxa ku tilmaam ay mid aan fasax looga haysan maamulka gobol ka Banadir oo ka digey in banaanbaxa uu dhaco
Halkan ka aqriso qoraalka ka soo baxay Wasaarada Amniga.
UGAASKA MUDULLOOD OO KU DHAWAAQ AY IN LA BAAJIYEY BANAAN-BIXII BERRI
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ah Ugaas ka beelaha Mudullood ayaa ku dhawaaqay in la joojiyey banaan-bixii loo balan sanaa inuu Muq disho ka dhaco Khamiista berri ee 13-ka Jana ayo. Ugaaska ayaa sheegay in guddigii u xil-saaraa qaban qaabada banaan-baxaas ay Shalay kulan gaar ah la qaateen, kadib markii ay is tu seen in banaan-baxaas uu ku gedaaman ya hay walaac amni.
Sidoo kale Ugaaska ayaa guul ku tilmaamay in hadda laga aqbalay in dib loo dhigo banaan-bi xii la qorsheeyey inuu berri dhaco, isla markaa na Axada soo socota la go’aami doono waqtiga uu dhacayo.
"Shalay waxaan u nimid wiilashii loo xil-saa ray qaban qaabada banaan-baxa, waa la fariisa nay waqti badan ayaan qaadanay, waxaan ku fa aneynaa in soo jeedinteenii ay nala qaateen, siy aasiyiinta iyo aqoonyahanka reer koofurta, dha qankooda ma maqlaan ayaa la dhihi jiray, laakiin Shalay marqaati waxaan ka nahay in wiilashee na ay aad noo aqbaleen,” ayuu yiri Ugaas Maxa muud.Sidoo kale Ugaaska ayaa sheegay in oda yaasha dhaqanka ay la wareegeen isku dubarid ka iyo iclaaminta goorta uu dhacayo banaan-ba xaas. "Maalinta Axada ah, waxaad naga sugi doo ntaan go’aan kama dambeys ah, odayaasha ay aa dhigi doona gogosha lagu iclaaminaayo waqt iga banaan-baxaas,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Ugaas Maxamuud. Ugu dambeyntii Ugaaska beelaha Mudulood ayaa shacabka Soomaaliyeed u rajeeyey in nab ad ay ku sii noolaadaan, "Dad kiina iyagoo mid ah ayey wixii ay siku raaca an ku dhaqaaqi doonaan, cabsida iska daaya waan ognahay in laga welw elay mudaharaadka,” ayuu yiri.
Wasaaradda amniga XFS ayaa Shalay soo saartay bayaan ay ku fasaxday banaan-baxaas, hase yeeshee waxaa si aan leex-leexad laheyn uga hor yimid oo banaan-baxaas diiday maamul ka gobolka Banaadir, waxaana aad looga cabsi qaban in isku dha cyo hubeysan ay berri Muqdi sho ka dhacaan.
Maamulka G/Banaadir Oo Ka Hadlay Khas aaraha Qaraxii Shalay Ka Dhacay Muq disho
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ka hadlay qaraxii Shalay ka dhacay wadada Afisyooni ee 21-ka Octoober ee degmada Waaberi ee Gobol ka Banaadir, kaasi oo geys tay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah iyo Askar.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Maa mulka Gobol ka la hadlay warbaahinta ayaa she egay in qaraxa oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu dhacay, xili uu marayey meel ku dhow albaabka laga galo Xera da Afisyooni, ayna horey uga sii socdeen.
Guddoomiye Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu dhaliyey khasaaro dhimasho iyo dhaawac, waxaana uu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 5 Askari, halka 5 qof kal ena oo shacab ahaa ay dhaawacmeen, kuwaasi oo la geeyay goobo Caafimaad.
Cali Yare ayaa waxaa uu tilmaamay in laama ha amniga ay wadaan baaritaano kala duwan oo ku aadan qaraxii ka dhacay Muqdisho, isla mar kaana Natiijada soo baxda ay la wadaagi doona an shacabka, isagoona xusay in waxa dhacay ay yihiin dhibaatada ay ka digayeen.
Shacabka kunool Caasimadda ayuu Gudd oomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Maa mulka Gobolka Banaadir ugu baaqay inay gury ahooda joogaan oo ay ka feejignaadan dhibaato oyinka, xiliyada qaarkood ka dhaca Magaalada.
Qaraxii ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa lala eegtay kolonyo ay wateen Saraakiil ka tirsan Qa ramada Midoobay
Madaxweynayaashii Hore Ee Dalka Oo War Ka soo Saaray Qaraxii Shalay Ka Dhacay Muqdisho
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ahna Musharax madaxweyne a Hassan Sheikh ayaa cambaareeyay weerarkii Shalay Magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ku dhinteen dad shacab ah.
Xasan Sheikh ayaa sheegay in falkaasi uu aad kaga xun yahay sidoo kalena waxaa uu ilaahay uga baryay intii ku geeriyootay in uu nax ariistiisa Janno siiyo kuwa dhaawaca ahna caafi maad degdeg ah siiyo.
"Waxaan cambaareynayaa weerarkii Shalay lagu laayay muwaadiniin aan waxba Shalaysan. Waxaan Alle uga baryayaa inuu naxariistiisa Jan no ka waraabiyo, dhaawacyadana caafimaad de gdeg ah siiyo. Midnimo & wadajir oo kaliya ayaan uga adkaan karnaa cadowga” ayuu yiri Xasan Sheikh oo qoraal soo saaray. Dhanka kale Mad axweynihii hore ee dalka Shariif Sheikh Axmed ayaa dhankisa ka hadlay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee manta ka dhacay Muqdisho, kaasi oo gaystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Shariif ayaa Cambaareeyay weerarka, waxaa na baaqay hay’adaha amniga in ay xoojiyaan ammaanka guud ee dalka, korna loo qaado tayaynta Ciidanka.
"Waxaan cambaaraynayaa qaraxii Shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, inta ku dhimatay Allaha u naxariisto inta dhaawaca ahna Allaha ca afiyo. Waa qarax fuleynima ah oo muujinaya dha garta cadowga, hey’adaha Amniga waxaan ugu baaqayaa in ay xoojiyaan xaqiijinta Amniga iyo la dagaalanka argagixisada, korna loo qaado feej ignaanta ciidanka maadaama dalka ku jiro xilli doorasho cadowguna isku dayayaan in dhibaa tooyin maleegaan” ayuu yiri Shariif Sheikh Ax med Madaxweynihii hore ee dalka
Qaramada Midoobay iyo Booliiska Soomaal iya oo siyaabo kala duwan uga hadlay qar axii Ismiidaaminta ee Shalay ka dhacay Muqdisho
Afhayeenka ciidamada Booliiska Soomaaliy eed Cabdifataax Xasan Aadan oo ka hadlay qa raxii Ismiidaaminta ahaa Shalay ka dhacay waddada 21-ka Oktoobar de gmada Waabari ee M/Muqdi sho ayaa sheeg ay in qaraxii Shalay uu geystay khasaare kala duwan oo dhimasho dha awac iyo burbur hantiya deed isugu jira.
Afhayeenka ayaa xaqiijiyay in dad gaaraya ilaa 9 ruux oo shan ka mid ah ahayeen askar 4-ta kalana ay ahayeen dad shacab ah ay ku dhi nteen qaraxa, islamarkaana ay ku dhaawac me en ilaa 14 ruux oo kale oo qaarkood xaalad halis ah ku jiraan.
"Waxa meesha ka dhacay waxay ahayeen wax lagu batilmaamedsanayo dhamaan umad da Soomaaliyeed, majirin wax gaaray saraaki ishii cadaanka aheyd oo iyagoo nabad qaba ayaa gaarigii ay saarnayeen laga soo dajiyay oo lagu qaaday gaari kale waxa ku dhintay me eshana dhammaan waa dad Soomaaliyeed" ay uu yiri af hayeenka Booliiska Soomaaliyeed Ca bdifataax Xasan Aadan.
Dhanka kale Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa si kulul waxa uu u Camb aareeyay qaraxii Ismiidaaminta ahaa ee Shalay loo adeegsaday gaari laga soo buuxiy ey waxya abaha qarxa, waxaana Qaramada Mi doobay ay beenisay in qaraxii Shalay lala be egsaday kola nyo gaadiid ah ay la socdeen Sar aakiil ama qan daraaslayaal Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska UN-ka ayaa wax aa tacsi loogu diray ehelada dadkii ku dhintay qa raxaas Ismiidaaminta ahaa, iyagoona caafimaad deg deg ah u rajeeyay dadkii dhaawacmay weer arkii Ismiidaaminta ahaa ee Shalay ka dhacay waddada 21-ka Oktoobar ee M/Muqdisho
"Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxa ay cambaareyneysaa weerarkii ismiidaami nta ahaa ee goor sii horreysay oo Shalay ah ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana ay tacsi u direysaa ehelada dadkii ku dhintay weerarka as, iyadoo u rajeysay kuwa ku dhaawacmay caaf imaad degdeg ah. Si ka duwan wararka qaar ee horay u soo baxay, ma jiraan shaqaale Qarama da Midoobay ka tirsan ama qandaraaslayaal ah oo ku jiray kolonyada la beegsaday” ayaa lagu yiri Qoraalka Qaramada Midoobay.
Al Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxii Shalay ka dhacay Muqdisho
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa barqadii Shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, sida lagu baahiyay Warbaahinta Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa sheegtay inay qarax ismii daamin ah la beegsadeen kol onyo ay la socdeen saraakiil caddaan ah, isla markaana ku burburi yen mid ka mida gaadiid kii ay caddaanku la soc deen.
Qaraxa ka dhacay M/Muqdi aho Shalay ayaa kusoo beegmaya xilli Maalinta Berito oo khamiis ah la qorsheeyay in M/Muqdi sho lagu qabto banaanbax lagu taageera ayo R/ Wasaa raha loogana soo horjeedo Farmaajo. kaa soo dib loo dhigay haatan
Qaar Ka Mid Ah Wasaaradaha Xukuu madda Oo Digniin Culus Loo Diray
Xaafiiska Hantidhawrka guud ee dalka ay aa digniin u diray wasaarado iyo Hay’ado dawla deed,kuwaaso oo ku howlan Talaabooyin
aan sharci aheyn xiligan kala guurka ah, ee dal ku marayo.
Wa-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Xaafi iska Hantidhawrka guud ee dalka ayaa lagu shee gay in dhawaanaahan uu waday baaritaan lagus ameeyay wasaarado iyo Hay’ ado dowli ah, kuwaasi faraha kula jira sida lasheegay arrimo sharcid arro ah, oo sameeyn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ku leh dalka.
Xafiiska ayaa Qoraalkiisa ku sheegay in ilaa iyo afar Wasaaradood uu dabagalku sameeyay, kuw aasi oo kala ah Wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka Badda, Wasaaradda ganacsiga iyo Warshadaha, Wasaaradda Awqaafta iyo arrim aha diinta iyo Wasaaradda Maareynta Musiibo oyinka.
Sidoo kale Xafiiska ayaa faray hay’adaha ay quseyso in ay hakiyaan heshiisyada ku aaddan kalluumaysiga ee wasaaraddu gasho iyo sidoo kale in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo qan daraasyada iyo hubinta badeecooyinka.
Wasiirka Gaashaandhigga Oo La Kul may Ergeyga Qaramada Midoobay
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga JFS Cabduqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ayaa la kulmay ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Qar amada Midoobey u fadhiya Soomaaliya James Swan,waxayna kawada hadleen sidii loo dardar gelin lahaa Qorshaha Kala-guurka Qaran iyo sidii Ciidanka Xoogga Dalka ay ula wareegi lahaay een amniga guud ee dalka.
Waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen in lasii kor dhiyo Dib-u-habeynta ciidamada, sare u qaad idda howlgallada Amisom.
Ugu dambeyntiina wux uu Wasiirka u caddeeyey er gey ga Qaramada Midoobay inay ka go’an tahay Dowlad da Fede raalka inaan Ciidanka Xoogga la siyaa sadeyn, kuna ekaadaan waajibaadkooda qaran.
Wasiirka ayaa uga mahadceliyey ergeyga ga arka taageerada ay la garab taagan yihiin sidii Soomaaliya ay u hanan laheyd amniga dalka.
Dowladda Mareykanka ayaa ka digtay inay xayiraado la beegsan doonto siyaasiyiinta iyo ma daxda Soomaalida haddii dib u dhac kale uu ku yimaado doorashada Soomaaliya, oo aan lasoo gaba-gebeyn kahor 25-ka Febraayo.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka Ned Price, oo shir jaraa’id qabtay ay aa ugu horeyn soo dhoweeyey go’aanka ay Gol aha Wadatashiga Qaran ku gaareen in doorash ada Soomaaliya lasoo geba-gebee yo kahor 25-ka Febraayo.
"Waxaan ugu baaqeynaa hoggaa miyayaasha federaalka iyo dowlad goboleedyada inay u hoggaansam aan jadwalka cusub ee la isku ra acay, islamarkaana ay saxaan khaladaadka illaa hadda hareeyey hanaanka doorashada,” ayuu yiri Ned Price.
"Doorashooyinka Soomaaliya waxay jadwa lkooda ka dib dhaceen hal sano. 8-da Febraayo waxay noqon doontaa sanad-guurada koowaad ee markii uu dhammaaday muddo xileedka mad axweynaha. Dowladda Mareykanka waxay diya ar u tahay inay adeegsato aaladaha ay heli karto, oo ay ku jirto xayiraado Visa, si looga jawaabo dib u dhacyo kale, ama ficillo kale oo wax u dhi maya sharafta hanaanka.”
Mareykanka ayaa horey dhowr jeer ugu hanj abay inuu beegsan doono qas wadayaasha So omaaliya, hase yeeshee weli ficil ma qaadin. Si kastaba, ilo-wareedyo diblomaasi ayaa Caasim ada Online sheegtay in ay u sheegay inay mark an ka go’an tahay inay tallaabo qaadaan.
Golaha Wadatashiga Qaran ayaa shirkoodii Muqdisho ku heshiiyey inay doorashada Golaha Shacabka kusoo dhameystiraan 45 cisho oo ka billaabata 15-ka Janaayo, kuna eg 25-ka Febraa yo. Go’aankan ayaa waxaa soo dhoweeyey mad axweyne Farmaajo oo marar badan lagu eedeey ey inuu yahay caqabadda doorashada dalka, isa ga oo madax goboleedyada ugu baaqay inay ku dhaqmaan heshiiskaas.
Farmaajo oo khudbad jeediyey habeen hore, ayaa wararka qaar ay sheegayaan inuu cadaadis kala kulmay Mareykanka si uu taageero ugu muu jiyey heshiiska cusub ee doorashada.
Mareykanka oo Mar kale digniin adag u diray hoggaamiyeyaasha Soomaalida
Dowladda Mareykan ayaa mar kale ka digtay dib u dhac ku yimaada jadwalka doo rashada ka dib warqad kasoo baxday Xafiiska Mareykan ka ee Geeska Afrika.
Dowladda Mareykanka ayaa she egtay in kuwa qaswadayaasha ah tilaabo adag laga qaadi doono. "Tallaabo ayaan ka qaadi doonnaa qaswadayaasha, haddii jadwalka cusub ee Golaha Wa datashiga Qaran aan xilligiisa la gu dhaqan gelin” ayuu yiri lagu warka kasoo baxay Mareykanka. Waa digniintii la baad ee loo diro Madaxweynaha muddo ileedki iso dhamaaday muddo 24 Saac gudahe eda.
Gaas, Faroole iyo CC Sharmaarke oo caddeey ey mowqifkooda ku aadan go’aankii Isimada
Madaxweynayaashii hore ee Puntland Cab diraxmaan faroole iyo Cabdiweli Gaas, ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa si wadajir ah bayaan uga soo saaray xiisada ka loo san magaalada Boosaaso.
Masuuliyiintaan ayaa bayaankooda uga soo hor-jeestay qodobadii ay Habeen hore Isi mada Puntland sheegeen inay doona ya an in lagu xaliyo xiisada Boosaaso ee u dhaxeysa Madaxweyne Deni iyo Agaasim aha PSF Maxamuud Diyaano
"Waxaan cadeyneynaa in qoraalka Isimada 5-ta ah ay soo saareenuusan quseyn ergadaya da, talo kuma lihin, waliba sidii aan kula balanay nalama aysan wadaagin, balse waxaan qoraalko oda ka aragnay baraha bulshada, qoraalka Isi mada maaha mid wax u taraya xasiloonida iyo wadajirka Puntland,” ayaa lagu yiri qoraalkan Xalay ka soo baxay siyaasiyiintaan Puntland.
Guddiga Doorashada Koofur Galbeed Oo Shaaciyay Dooarshada 5 Kursi Oo Dhawaan La Qaban Doono
Guddiga hirgelinta doorashada Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa shaaciyay kuraas ka tirsan Golaha Shacabka,kuwaasi oo dhawaan ay qaban doonaan dooarshadooda.
Guddiga hirgelinta doorashada Koofur Galbeed Soomaaliya ee SEIT waxaa uu shaaciyeen jadwalka doorashada 5 kursi oo ka mid ah 11 kii kursi guddiga shaa ciyey 1/1/022.
Hoos ka akhriso Warqadda kasoo bax day Guddiga doorashada
Wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya, Ca bdiraxmaan Caynte ayaa ka hadlay digniinta uu saaray Mareykanka ee la xiriirta dib u dhac kale ee ku yimaada doorashada, taasi oo qorshuhu yahay in la soo gaba-gabeeyo 25-ka Febraayo.
Cabdiraxmaan Caynte ayaa shee gay in digniinta Mareykanka ee xay iraadaha ay si toos ah u saameyn doonoto madaxda ku shaqada leh doorashada iyo kuwa sababay dib u dhacyada is biirsada, oo sida la fahamsan yahay uu kow ka yahay madaxweyn ihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
"Sida uu Mareykanka warkiisa uu ku sheegay waxay si toos ah u beegsan doonaan dadka leh go’aanka doorashada ama dib u dhaceeda sab abi kara, waan ognahay dib u dhaca hadda gaar ay sanadka waxa uu ku yimid go’aano la qaatay oo dib u dhac uu yimaado, mararka qaarna lagu sigtay in xaalada faraha ka baxdo,” ayuu yiri.
"Mareykanka marka uu sameeyo hanjabaa do xayiraad ah waxa uu haysta xulashooyin bad an oo iskugu jira cunaqabteyn dhaqaale uu saaro dal ama shaqsiyaas, qaarkood uu ka xanibo fiiso oyinka, waxayna ku xiran tahay marwalba danta ay siyaasada arrimaha dibedda ee Mareykanka ka leedahay dalka la beegsanayo.”
Sidoo kale waxa uu sheegay in xanibaada Visaha ay ceebeyn weyn ku tahay madaxda lala beegsanayo ee Soomaaliyeed, marka loo eego madaxda dunida kale, maadama ay madaxdee na ay inta badan tagin Mareykanka.
"Madaxda dowlada federaalka iyo kuwa dowl ad goboleedyada inta badan iskuma mashquuliy aan inay tagaan Mareykan, laakiin waa ceebeyn aduunka hortiisa iyo shacabkooda lagu dhar dhi gayo mooye. Waxaana laga yaaba in dalalka ka le ee reer galbeedka ay qaadan tallaabooyin la mid ah.”
Waxa uu intaas kusii daray in hanjabaada ugu culus ee Mareykanka ay xilligan tahay midda dha qaale, maadama uu sheegay in Mareykanka uu yahay dalka ugu weyn ee taageera dowladda Soomaaliya.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka Ned Price, oo shir jaraa’id qabtay ay aa ugu horeyn soo dhoweeyey go’aanka ay Gola ha Wadatashiga Qaran ku gaareen in doorasha da Soomaaliya lasoo geba-gebeeyo kahor 25-ka Febraayo.
"Waxaan ugu baaqeynaa hoggaamiyayaasha federaalka iyo dowlad goboleedyada inay u hogg aansamaan jadwalka cusub ee la isku raacay, islamarkaana ay saxaan khaladaadka illaa hadda hareeyey hanaanka doorashada,” ayuu yiri Ned Price.
"Doorashooyinka Soomaaliya waxay jadwal kooda ka dib dhaceen hal sano. 8-da Febraayo waxay noqon doontaa sanad-guurada koowaad ee markii uu dhammaaday muddo xileedka mad axweynaha. Dowladda Mareykanka waxay diya ar u tahay inay adeegsato aaladaha ay heli karto, oo ay ku jirto xayiraado Visa, si looga jawaabo dib u dhacyo kale, ama ficillo kale oo wax u dhim aya sharafta hanaanka.”
Mareykanka ayaa horey dhowr jeer ugu han jabay inuu beegsan doono qas wadayaasha Soo maaliya, hase yeeshee weli ficil ma qaadin. Si ka staba, ilo-wareedyo diblomaasi ayaa Caasimada Online u sheegay inay markan ka go’an tahay inay tallaabo qaadaan
Guddiga doorashooyinka federaalka oo war ka soo saaray khilaafka doorashada Galmudug
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga doora shooyinka heer federaal ayaa ka soo hor jeestay xil ka qaadistii Shalay la sheegay in lagu same yey guddoomiyaha guddiga doorashada heer do wlad goboleed ee Galmudug Maxamed Daahir Guuleed.
Afhayeenka guddiga doorashada heer federa al Axmed Safiino oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in war qadii Shalay la gu faafiyey bog ga rasmiga ah ee guddiga doo rashada Galm udug aysan sax aheyn.
Sidoo kale Afhayeenka ayaa sheegay in xubinhii soo saaray warqadaas ee ku dhawaaqay inay xilkii ka qaad een guddoomiyahooda uu guddiga heer federaal anshax marin ku sameyn doono.
"Guddiga doorashada Galmudug wax shir ah oo ay guddoomiyahoodii ku rideen ama mid kale ku doorteen ma uusan yeelan, sidaas dartee cidii been abuurka sameysay tallaabo ayaan ka qaadi doonaa,” ayuu yiri afhayeenka guddiga doorasha da heer federaal Axmed Safiina.
Xubnaha guddiga doorashooyinka Galmudug ee Shalay sheegay inay xilkii ka qaadeen gudd oomiyahooda Maxamed Daahir Guuleed ayaa warqadooda ku shaaciyey inay guddoomiye cus ub u doorteen Maxamed Qaasim Maxamuud oo horay u ahaa xogyaha guddiga.
Dhalinyaro Siyaabo kala duwan loogu dilay Muqdisho.
Koox hubeysan ayaa Allaha unaxariistee Habeen hore fiidkii ku dilay magaalada Muqdisho tiro dhalinyaro ah kuwaa oo gaarayo ilaa 6-qof.
Dhalinyarada la dilay waxaa ka mid ah Cabduqaadir Xassan Ash kir oo lagu dilay xaafada Carafa ad ee Dagmada Yaqshid. Marx uumka ayaa la dilay xilli laga dhacaayey taleefan kiisa gacanta.
Habeen hore ilaa Dorraad waxaa Muqdisho lagu dilay ilaa 6 dhalinyaro oo uu sidoo kale kamid yahay allah u naxariisto Abdulkadir Nuur.
Sida ay KNN ushegeen dadka degaanka 4-ka mid ah waxaa dilay tuugo teleefanada doonayay inay ka dhacaan, halka kalana uu dilay askari, waxaana kan kale aan la ogeyn Cida Diashay.
Maalmihii lasoo dhaafay Waxaa muqdisho ku soo badanayay Dhaca taleefannada. Waxaana Kooxa wax dhacayo ay dilayaan Qofkii laga wa ayo ama isku dhejiyo teleefanka ,waxaana dham aan baxsado Burcada xubeeysan ee dilka geesato.
Laamaha Amaanka Dowladda wali kama ay san hadlin dilalka kala duwan ee ka dhacay Muqdisho.
Nin arday ahaa oo dil iyo dhacba loogu gaystay Magaalada Muqdisho
Cabdulqaadir Nuur Maxamed Khayre oo ah aa arday wax ka baran jiray Jaamacadda SIU ay aa Shalay lagu aasay khabuuro ku ya ala duleedka Magaalada Muqdisho.
Ciidamo ka tirsan kuwa Dowl adda Federaalka ayaa Dorraad ga lab Cab dulqaadir Nuur waxa ay dhac iyo di lba ugu gayst een xaafadda Soona Key ee Deg ma da Hodan. Ciidamada ayaa la sheegay inay waddada u galeen marxuumka, xilli uu ka soo ba xay Jaam acadda SIU oo uu wax ka baranayay, waxaana la sheegay inay ka dhaceen teleefanki isii gacan iyo laptop uu sitay.
Marka aad fiiriso waddada lagu dilay marxuum ka waxa ay qiya astii boqol tallaabo u jirtaa Jaam acadda Somaliya, dilkiisa ayaana argagax ku abuuray ardaydii ay wax wada bar anayeen.
Cabdulqaadir Nuur oo afar iyo labaatan jir ah aa ayaa la sheeg ay inuu waxbarashada ku fii cnaa, isla-markaana uu Semester-kii 5aad mar ayay.
Cabdulqaadir Nuur oo yaraankii qoyska ahaa wa xay qoyskiisu dalbadeen in sharciga la horkeeno askartii dishay, oo ay ku eedeynayaan inay ka tir san yihiin Kumaandooska Gorgor ee Turkiga uu tababaro.
Guled Xasan Duraan oo ah muwaadin Soo maali ah kuna xiran xabsiga Guantanamo Bay ayaa la sheegay in laga sii daynayo xabsiga.
Duraan ahaa maxbuuskii ugu horreeyay ee laga keeno xabsiyada qarsoodiga ah ee C.I.A ayaan weligiis lagu soo oogin wax dacwad ah.
Maxbuuskan Guuleed Xasan Duraan, oo 47 jir ah, ayaa go’aankan loo sheegay Isniinta aynu ka soo gudubnay oo ku beegnayd sannad-guu radii 20-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii xab siga lagu hayo ee saldhigga ciidammada badda Mareykanka ee Cuba.
Waxa uu noqonayaa maxbuuskii 15-aad ee 39-ka maxbuus ee weli ku jira Guantanamo oo loo ogolaaday in la sii daayo, hadii uu helo dal qa abilaya oo damaanad qaadaya amnigiisa.
Duraan ayaan loo ogoleyn inuu ku laabto dalkiisa sida uu dhigayo xeerka wareejinta maxaabiista Guantanamo oo si gaar ah looga mamnuucay dalalka Soomaaliya, Libya, Syria iyo Yemen.
Guled Duraan waxaa lagu qabtay dalka Ja buuti sanadkii 2004-tii, wuxuuna ku sugnaa ilaa 900 maalmood xabsiga qarsoodiga ah ee sird oonka Maraykanka C.I.A., ka hor intaan lagu war eejiyey xabsiga weyn ee Guantanamo Baysan adii 2006.
Qoorqoor Oo La Kulmay Danjiraha Sweden U Fadhiya Soomaaliya
Madaxweynaha D/Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa Shalay M/ Muqdishu kula kulmay Danji raha dalka Sweden u fadhiya Soomaaliya Danjire Per Lindgarde.
Madaxweynaha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay arrimo ku aaddan marxaladda siyaasade ed ee taagan, waxaana si gaar ah ay diiradda u saareen doorashada iyo horumarinta Galmudug.
Danjiraha dalka Sweden u fadhiya Soomaali ya Danjire Per Lindgarde ayaa dhawaanhaan kul amo kalduwan Muqdisho ka waday, waxaaana horay uu kulamo siyaasadeed oo ku aaddan ar rimaha doorashooyinka la yeeshay mas’uuliyiin ay qayb ka yihiin madaxweynayaal Dowlad Gob oleed.
Xili dhawaan Muqdisho lagu soo gaba-gabeeyay Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran, kaasi oo go’aan looga gaaray arrimihii doorashooyinka ee Muranku ka taagnaa.
Ujeedka kulanka Axmed Madoobe, Shariif iyo Xasan
Hoggaamiyaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo weli ku sugan ma gaalada Muqdisho ayaa Habeen hore kulan gaar ah la qaatay madaxweynayaashii hore ee dalka, Sh. Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxa muud.
Kulanka oo saacado qaatay ayaa ka dhacay hoyga uu Axmed Madoobe ka dagan yahay ca asimadda, waxaana diiradda lagu saaray xaa ladda guud ee dalka iyo doorashooyinka.
Ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii loo sii dhaq aajin lahaa heshiiska cusub ee lagu gaaray Muq disho, waxayna Shariif iyo Xasan Axmed Mado obe ka dalbadeen inuu dardar-geliyo doorasha da, si waqtiga la qabtay loogu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka.
Sidookale madaxweynayaa shii hore ayaa hoggaamiyah a Jubbaland ku boggaadiy ey dadaalkiisa iyo doorka uu ku lahaa shirkii lagu soo gab ag abeeyey Muqdisho.
Dhinaca kale Axmed Madoobe ayaa Shalay kusii jeeda Kismaayo, kadib maalmo uu ku sugn aa caasimada, isaga oo la filayo inuu sii amba qa ado doorashada Golaha Shacabka.
Muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa Mu qdisho ka socday kulamo siyaasadeed oo u dhe xeeyey dowladda federaalka, dowlad goboleedya da iyo mucaaradka, kuwaas oo gabi ahaan looga hadlay ka gudubka kala guurka iyo dhammeystir ka doorashooyinka dalka.
Si kastaba, Soomaaliya ayaa ku daahday xaal adda kala guurka ah ee ka dhalatay muranka do orashooyinka oo muddo sanad ah dib uga dhac ay waqtigii loo qorsheeyey in la qabto
DF/ Soomaaliya ayaa Shalay aroortii hore dal ka dib ugu soo celisay tahriibayaal Soomaali ah oo muddo sanado ah ku xirnaa dalka Liibiya, kuw aas oo gaarayo illaa 97 ruux.
Dadka lasoo celiyey oo u badan dhalinyaro ayaa isugu jiro rag iyo dumar, waxaana garoonka Aadan Cadde kusoo dhowe eyey wasiiro iyo mas’uuliyiin ka tirsan DFS
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xuk uumadda Soomaaliya, Cabdisaciid Muuse Cali oo wariyeyaasha kula hadlay garoonka ayaa she egay in dowladda federaalka ah ay dadaal xoog an gelisay sidii dhalinyaradan dib loogu soo celin lahaa dalka, kuna guuleysatay.
"Dowladda federaalka Soomaaliya sidaad ogtihiin waxay dadaal badan gelisay sidii maxa abiista meelo badan oo caalamka ka mid ah ku ji ra iyo dadka dhiban oo wadamo badan ku dhiban in waddankooda lagu soo celiyo,” ayuu yiri wasiir Cabdisaciid.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dhaliny arada Shalay la keenay ay yihiin qaybtii ugu hor reysay ee dalka dib loogo soo celiyey, tan iyo markii uu dilaacay cudurka Covid-198.
"Racaan waa racii ugu horreeyey intii uu u dhacay Covid-19 dad badan oo meelo kala duw an duwan xirana waa lasoo celinaa haddii Ilaah eyn Idmo,” ayuu sii raaciyey.
Ugu dambeyn wasiirka ayaa u mahacad celi yey hay’adaha caalamiga ah ee dowladda Soom aaliya ka gacansiiyey, sidii dhalinyaradan dib lo ogu soo celin lahaa dalkooda.
Dowladda federaalka ayaa horay ugu guuleys atay inay maxaabiis fara badan kasoo deyso qaar ka mid ah dalalka caalamka, taas oo aad loogu baadiyey dowladda dhexe.
Askarta ku sugan GEDO oo digniin culus loo diray kadib…
Saraakiil ka tirsan Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo haatan ku sugan magaalada Be ledxaawo ayaa kulamo kala duwan la yeeshay askarta dowladda ee ku sugan gob olkaas oo hoostaga dowlad gobole edka Jubbaland.
Maxamed Cabduqadir Maxamed oo ah ku xigeenka xeer ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada oo ka mid ah saraaki isha haatan jooga gobolka ayaa uga digay cii damada dowladda ee ka howlgala halkaasi dilal ka shacabka, wuxuuna faray inay ka fogaadaan waxyeeleynta rayidka.
Xeer ilaaliye ku xigeenka ayaa shaaca ka qaa day in askarta ay hubka u sitaan inay ku difaac aan shacabka, wuxuuna sheegay in askarigii ku xadgudbaa laga qaadi doono tallaabo adag.
"Waxa qoriga laguugu dhiibay waa inaa ku difaacido shacabka Soomaal iyeed, askarigii lagu helo inuu dilay qof muwaadin ah waxaa la mars iin do onaa sharciga,” ayuu yiri Maxamed.
Digniintan ayaa kusoo aadeyso, iyada oo ma almihii u dambeeyey gobolka Gedo siyaabo kala duwan loogu dilay dad shacab ah, kuwaas oo dilalkooda ay geysteen askarta dowlada.
Sidoo kale waxa ay Maxkamadda Ciidamadu tod obaadkan gudihiisa dil ku fulisay illaa laba askari oo siyaabo kala duwan dad shacab ah ugu dilay degmooyinka Beledxaawo iyo Luuq.
Si kastaba, muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo badaneysay qeylo dhaanta shacabka ka imaaneyso ee ka dhanka ah ciidamada, waxa ana ka mid ah meelaha ay dilalka ka geysteen Muqdisho oo dadka lagu dilay ay ka mid yihiin gabar iyo wiil walaalo ahaa.
Madaxda Hay’adda Tayo-Dhowrka Somal iyed Oo Ka Hortimid Isbedel Lagu Sameeyay
Maareeyihii guud ee Hay’adda Tayo-dhowrka Soomaaliyeed Aadan Xasan Barre ayaa ka hor yimid shaqo joojin uu Dorraad ku sameeyay Was iirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaa lka ee xilgaa rsiinta Khaliif Cabdi Cumar.
Qoraal kasoo baxay Maareeye ku-xigeenka Hay’adda Tayo-dhowrka Ceyndaruus Macalin Xasan ayuu sharci darro ku tilmaamay shaqo joojinta uu Was iirka Ganacsiga ku sameeyay Maareeyihii Hay’ad da Tayo-dhowrka, kuna sheegay Warqada soo baxday mid aan waafaqsaneynin Dastuurka.
Maareeye ku-xigeenka Hay’adda Tayo-dhow rka Ceyndaruus Macalin ayaa caddeeyay in ays an aqoonsaneynin Isbedelka uu sameeyay Wasi irka Ganacsiga, isagoona xusay in tallaabada uu qaaday Wasiirka aan loo marin waddo sharci ah.
Sidoo kale Qoraalka Maareeye ku-xigeenka ayaa lagu sheegay in baraha Bulshada ku arke en Warqad uu qoray Wasiir Khaliif Cabdi, isla markaana hab-raac sharci darro ah uu shaqadii Hay’adda Tayo-dhowrka ugu wareejiyay Shirkad gaar loo leeyahay.
Wareegto uu soo saaray Wasiir Khaliif Cabdi ayuu shaqada uga joojiyay Maareeyihii guud ee Hay’adda Tayo-dhowrka, waxaana lagu eedee yay xadgudubyo kala duwan uu ku kacay iyo Wadashaqeyn la’aanta Mas’uuliyiinta kale ee Hay’adda.
Sharon Ringo waa gabadh 11 jir ah, balse do wladda Tanzania ayaa u magacowday in ay noqoto danjiraha dalkaasi ee arrimaha dalxiiska ee dalkaas.
„Waxaan u maleeynayaa in ay tahay arrin wanaag san, sababtoo ah ma ah an arrin sahlan in aad dan jire noqotid adiga oo carr uur ah" ayay tiri Sharon oo ah qof ixtiraam badan u haysa deegaan ayaaba xilli hore biloowday hawlaha la xiriira nadaafadda iyo daryeelka deegaanka.
Sharon ayaa ahayd ardayga ugu fiican iskuulk eeda oo ku yaala magaalada Daara Salaam, iyada oo sidoo kale hormuudka ardayda ka mid ahayd.
Riyadeeda iyo rejadeedu waa in Bariga Afrika noqoto meesha ugu weyn ee loosoo dalxiis tago ad duunka, iyada oo sidoo kale la beerayo dhir badan.
Goobta khatarta lagaga dhuunto
Dameer la xardhay si xayawaan kale loogu ekeys iiyo!
Sharon waxa ay sheegtay si ay kaalinteeda sha qo uga soo baxdo, in ay akhrisay buugaag badan oo la xiriira dalxiiska, iyada oo sidoo kale safaro ku kala bixisay qeybo badan oo Tanzania ka mid ah. Waxan oo dhan waxa ay u samaysay si ay faham uga hesho shaqadeeda cusub.
Sharon ayaa ahayd ardayga ugu fiican iskuulke eda oo ku yaala magaalada Daara Salaam, iyada oo sidoo kale hormuudka ardayda ka mid ahayd.
Riyadeeda iyo rejadeedu waa in Bariga Afrika no qoto meesha ugu weyn ee loosoo dalxiis tago add uunka, iyada oo sidoo kale la beerayo dhir badan.
Hadda waalidkeed ayay la nooshahay, waxayna de genyihiin magaalada Daarasalaam, waxay ku fiic antahay dhanka dabaasha iyo heesaha.
42 dhalinyaro reer Somaliland ah oo dowlada Soomaaliya kasoo daysay xabsiyada dalka Liib iya oo ay ku xidhnaayeen kadib markii ay isku da yeen tahriib, ayaa markii ay Hargaysa soo ga adheen sheegay in qasab Xamar looga dajiyay, laguna qasbay in ay warbaahinta la hadlaan.
"Waan ku faraxnahay in dalkaygii hooyo ee Jamhuuriyada Somaliland aan kusoo noqdo inkasta oo Xamar nalaga dajiyay oo anaan raali ka ahayn...waxa nalagu qasbay in waraysi qasa ba nala waraysto" mid kamida dhalinyarada oo warbaahinta kula hadlay madaarka Cigaal ee Hargaysa, ayaa sidaa yidhi.
"Laba dowladood oo siman baanu nahay, mar kaa Shalay ayay na afduubeen oo ayna yidha ahdeen Soomaaliya ayaad u dhalateen, umana an dhalane Somaliland ayaanu u dhalanay" ayuu yidhi.
Guddoomiyaha Hay'adda Barakacayaasha Somaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif, ayaa sheegay in dowlada Soomaaliya ay arrimo siyaasadeed uga faa'iidaysatay dhalinyarada la soo celiyay.
"Waanu ka xunahay in la siyaasadeeyo iyago on siyaasad ba u baahnayn, oo madaarkii Xamar lagaga dhex hadlo 'midnimada Soomaaliya waa muqadas' inta makarafoono loo dhiibo," ayuu yidhi Xinif.
Mid kamid ah dhalinyarada reer Somaliland, ayaa markii laga dajiyay madaarka Aadan Ca dde, ee magaalada Muqdisho, warbaahinta u sheegay in dowlada Soomaaliya ay soo bad baadisay, isagoo u mahadceliyay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.
Maxay Galmudug ugu nugushahay weerarada Al Shabaab?
General Cabdullaahi Aadan Xuseen (Cirro), Taliyihii hore Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa ka hadlay culeyska muuqdo ee maleeshiyada Al Shabaab ku hayaan deega anada Galmudug.
Shabaabka ayaa muddooyinkii ugu dambe ysay dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Galmudug ka waday Gobolada Dhexe, taasoo ay dadka deega anku dareemeen, markii ay meesha ka baxday Ahlu Sunnadii Bartamaha Somaliya.
Taliyaha oo marka hore ka hadlayay labada Sarkaal ee Axaddii lagu dilay dagaalka ka dha cay deegaanka Cadakibir ee Gobolka Galgaduud ayaa yiri "Geeridu waa xaq, askarigana waxaa loogu talagalay nolol iyo geeri, qaddarta Rabina meeshaad ku dhimanayso waa wax Alle og yahay.”
Waxaa uu sheegay in Shabaabku ay dara asaad ku sameeyeen deegaanada Galmudug iyo xiriirka maamulkaasi kala dhaxeeya Hirshabelle, oo ood wadaag ay yihiin. "Shabaabku waxay daraasaad ku sameeyeen deegaanada Galmudug iyo isa saarka Hirsh abelle, markaad fiiriso xiriir rasmi ah kama dhaxe eyo oo xagga la dagaalanka Shabaabka ah. Si doo kale Galmudug dhexdeeda marka la fiiriyo deegaanada hadda ay ka dirirayaan, beelaha u badan isma kaashadaan oo iskaashi ma same yaan. Jufo, jufo ayay ula diriraan oo cadowgaanu waa cadow guud oo uma diyaargaroobaan, mar ka ma jirto isbahaysi sidooda ka soo horjeeda.” Ayuu yiri jananku.
Isagoo la hadlayay BBC ayuu yiri "Waxay ka loo ka faa’iideysteen is qabadka Culimadii Ahlu Sunna iyo Galmudug, oo ay ogaadeen halkaasi inuu is qabsi ka jiro, waxay is yiraahdeen waxaa idinkaga furan dalool dhinac walba ah, markay miisaameen.”
General Cirro ayaa tilmaamay in Shabaabku arkaan tiir adag oo Gobolada Dhexe ka hortaag naa waa Ahlu Sunna’e uu meesha ka baxay.
Jananka ayaa qaba in Shabaab looga adkaan karo in diyaargarow uu jiro, iyadoo markaasi la hagaajinayo xiriirka dadweynaha iyo kan maa mulada.
"Cadowga waxaa looga guuleysan karaa in diyaargarow la sameeyo. Diyaargarowga waxaa asal u ah xiriir inuu jiro oo dadka deegaanka ah ama maamulada, oo cadowgaasi ka soo hor jeeda.” Ayuu yiri General Cirro.
Waxa uu intaasi ku daray "Waxay u baahan tahay Dowladda Galmudug inay abaabul sax ah sameyso, dadka deegaankuna ay is abaabulaan, dowladowdiina ay kaashadaan, markaa ka dib baa cadowga lala diriri karaa.”
Labada sano ee Maamulkii Ahlu Sunna uu me esha ka maqan yahay, xafiiskana uu jooggo Mad axweyne Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) wax ay Shabaabku kordhiyeen hujuumka ay ku haya an deegaanada Galmudug.
Muddadaasi marka laga soo taggo Shabaab ku inay qabsadeen deegaano ka tirsan Galmud ug, xaalad amnina ay ka abuureen dhulka Gal mudug ay maamusho, haddana muddadaasi waxay qaraxyo iyo dagaal toosba leh ay ku dile en dhowr iyo toban Sarkaal oo ka tirsanaa Saraa kiisha Ciidamada.
Guddoomiyahii Guddiga Hirgelinta Doora shada Maamulka Galmudug oo xilkii laga qaaday
Kulan aan horay loo sii shaacin oo ay isugu yi maadeen Shalay xubno ka tirsan guddiga hir gelinta doorashada maamulka Galmudug ayaa waxay xilka qaadis ku same yeen guddoomiyahii guddiga as Maxamed Daahir Guule ed.
Xubnaha guddiga doora shada Gal mudug ee xilka qaadista ku sam eeyay gud doomiyahii guddiga ayaa cod gacan taag ah xilkii uga qaaday, islamarkaana gudd oomiye cusub waxay u door teen xoghayahii hore ee guddiga doorashada Galmudug Maxamed Qa asim Maxamuud oo sidaas ku noqday guddo omiyaha cusub ee gud diga doorashada Galmu dug.
Guddoomiyaha xilka qaadista lagu sameeyay Maxamed Daahir Guuleed ayaa dhankiisa been abuur ku tilmaamay xilka qaadista lagu sa me eyay, islamarkaana aysan jirin wax kulan ah oo ay Shalay isugu yimaadeen guddiga hirgelinta doorashada maamulka Galmudug.
Arintaan ayaa noqon karta caqabad hor leh oo kusoo korartay howlaha doorashooyinka oo loo balansan yahay in mudo kooban lagu soo gaba gabeeyo doorashada Golaha Shacabka Baarlam aanka 11-aad ee dalka, waxaana xusid mudan in doorashadii ka dhacday Galmudug ee Golaha Shacabka ay aheyd mid lagu tilmaamay xulasho oo aad looga cabasho looga muujiyay.Hoos ka akhriso qoraalka Guddiga Hirgelinta Doorashada Galmudug.
Ruushka Iyo Isbaheysiga NATO OO Shalay Shir Uga Furmaya Caasimadda Brussels
Waxaa Shalay oo Arbaco ah ka furmaya Caa simadda dalka Belgium ee Brussels, wada xaa joodyada u dhexeeya Ruushka iyo NATO, kaas oo ay kaga wada hadlayaan Colaadda Ukraine.
Ukraine ayaa horay ugu dhawaaqday inay diyaar u tahay inay qaadato go’aamo ay ku tilShalayy in ay lagama maarmaan u yahiin si loo soo afjaro xasaradda dagaalka, halka wasaaradda arrimaha dibad da Ruushka ay sheegtay inay sug ayso jawaabta Washington ee ku aaddan dammaanad qaadka ammaanka Ukra ine.
Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa dhankeeda sheegtay in xoghaye Anthony Blinken uu kala hadlay dhiggiisa Ukraine Dmytro Kuleba, sii socoshada militariga Ruushka ee ku wajahan xadka Ukraine. Diblomaasiyadiinta ku hawlan qabanqaabada Wada hadalan u dhaxee ya NATO iyo Ruushka, ayaa sheegay in soo jee dinno badan oo ka yimid dalalka Yurub ay keen tay in lagu dhiirado wada xaajoodkan u dhaxee ya NATO iyo Ruushka, si loo qaboojiyo xiisadda taagan.
Jawhar Maxamed iyo Baqale Gerba oo shee gay inaysan ka tanaasulayn xaq u raadinta qowmiyadda Oromo
Jawhar Maxamed iyo Baqale Gerba oo kamid ah xisbiga OFC ee Oromo ee dhawaan xabsiga laga siidaayay, oo shir jaraa'id qabtay ayaa dow ladda Itooboya ka codsaday, in xal nabadeed laga gaaro colaadda Itoobiya, isla markaana dowladda iyo TPLF miiska wada hadalka isugu yimaaddaan.
Xubnahan ayaa sidoo kale dowladda dhexe ka codsa day, in baadhitaan dheeri ah lagu sameeyo dadkii ka dam beeyay dilkii fanaankii Or omo ee Hachalu Hundessa, oo ilaa hadda dad badan oo kasoo jeeda qowmiyadda Oromo, ay san ku qanacsanayn baadhitaannadii ay dowlad du samaysay ee ku saabsanaa dilkii fanaankaHachalu Hundessa.
Waxa kale oo ay sheegeen inaysan marnaba ka tanaasulayn, xaqa iyo u doodidda xuquuqda qowmiyadda Oromo, taas oo inbadan ay dhib aato usoo mareen, markii dambena xarig u galeen. Jawhar Maxamed iyo Baqale Gerba oo lab aduba ku jiray dad ay dowladdu maalmo ka hor xabsiga ka siidaysay, ayaa waxay inta badan u doodaan xuquuqda qowmiyadda Oromo ee ay kasoo jeedaan iyagu, iyagoo siyaasadda dalka
Itoobiyana meel adag kaga jira.